Shabageynta Birta Isku-dhafka ah
Ku xidh Shabageynta Birta
Shabageynta Birta Seerrated
Shabageynta Biraha Qaababka Gaarka ah
Shabageynta Birta Aan Lahayn
Shabageynta Birta alxanka leh
Xumbo Aluminium ah
Waa maxay siyaabaha loo rakibo sharoobada birta ah
Guud ahaan, waxaa jira laba hab oo lagu rakibo shabagyada birta: alxanka, iyo qalabka rakibida. Haddaba, maxay yihiin faa'iidooyinka iyo khasaaraha ay leedahay in lagu rakibo biraha birta? Aan hoos eegno. Alxanka waa habka caadiga ah ee rakibidda iyo hagaajinta. Guud ahaan, afarta dhibcood ee agagaarka st...
Faa'iidooyinka FRP ee qolka baabuurka lagu dhaqo
Astaamaha FRP-da ee baabuurka lagu dhaqo. Shabagga FRP ee qolka lagu dhaqo baabuurka waa mid aan sibiqnayn oo cadaadis u adkaysan kara. Shabagga FRP waa nooca roodhida, kaas oo ka daadan kara biyaha oo u adkaysta daxalka. Shahaadada FRP waxay leedahay midabyo kala duwan, waxaana jira noocyo badan oo la heli karo. Xisbiga FRP ayaa...
Ma u soo bandhigi kartaa qorraxda galvanized birta?
Birta galvanized-ka ah ma loo soo bandhigi karaa qorraxda? Kuleyl-ku-dhuuqista galvanized birta daaqadaha ah ayaa hadda si ballaaran loo isticmaalaa, taas oo asal ahaan xallisa dhibaatada daxalka iyo dhaawaca alaabta birta dhaqameed iyo alaabta caaga ah ee alwaax. Shabaglaha birta galvanized-kululka leh waa in ay soo bandhigtaa t...
Isticmaalka sifada leh ee jaranjarada jaranjarada daaqa birta ah
Tallaabooyinka jaranjarada ayaa si weyn loogu isticmaalaa warshadaha korontada, dhirta biyaha iyo warshadaha kale, iyo sidoo kale injineernimada dawladda hoose, injineernimada fayadhowrka iyo qaybaha kale, jidadka lugaynta, tiyaatarada, kanaalada daawashada, meelaha baabuurta la dhigto iyo goobaha kale ee waaweyn ee dhulka. Talaabada jaranjarada waa alaabo si qoto dheer loo farsameeyay oo laga sameeyay stee...
Astaamaha iyo codsiyada hordhaca ah ee shaadhka birta
Shabaglaha birta ah waa in lagu cadaadiyo birta labajibbaaran ee qalloocan iyadoo loo eegayo fogaan gaar ah oo loo galayo birta fidsan ee xoogga dambe, si loo helo saxan shabaq ah oo leh kalagoysyo alxan oo xooggan, qaab saxan u eg iyo dusha leydi leh. Birta fidsan waxay helaysaa culayska, iyo isgoysyada (jihada qalloocan...
Ku saabsan hordhaca mashruuca birta galvanized galvanized-ku-shubasho ah
Birta galvanized-kululeed-ku-shubasho waa walax dhisme u qaabaysan oo ka samaysan bir fidsan bir kaarboon yar iyo bir labajibbaaran oo labajibbaaran oo si toosan iyo toosan loo alxanayo. Ku-shubasho birta galvanized kulul waxay leedahay iska caabin saameyn xoog leh, iska caabin daxalka xooggan iyo awoodda culeyska culus, xarrago iyo qurux...
Doorka shabaqlaha fiberglassku ku leeyahay qurxinta waddooyinka
Magaalooyinka qaar ayaa tixgaliyay xaaladda aan kor ku soo xusnay, waxa ay sameynayaanna waa in xididdada geedaha si buuxda loogu xiro sibidh. Tani ma aha talo. Tani uma roona koritaanka geedaha, sababtoo ah geedaha labada dhinac ee waddooyinka magaalada maaha geed caadi ah. Nolol waa rel...
Faa'iidooyinka shabagga birta
Bir-mareennada birta ayaa hadda si tartiib tartiib ah ugu biiray nolol maalmeedkeena. Tusaale ahaan, biraha birta ah ayaa lagu rakibay dukaamada baabuurta lagu dhaqo ee magaalooyinka kala duwan. Ma fahantay faa'iidooyinkeeda? Bal aan eegno. 1.Muuqaalka quruxda badan, waarta
Codsiga ballaaran ee shabaggeedii birta
Shabaglaha birta ah ayaa si weyn loogu isticmaalaa petrochemical, korontada, biyaha qasabada, daaweynta bulaacada, dekedda iyo wharf, qurxinta dhismaha, dhismaha maraakiibta, baarkin iskood u shaqeysta, injineernimada degmada, injineernimada fayadhowrka iyo qaybaha kale. Kanaalada, jidadka lugaynta, buundooyinka trestle, daboolka dhufeysyada, godad godad...
Codsiga Gabion Net ee Mashruuca Dhismaha Wadooyinka iyo Buundooyinka
Shabakadda Gabion waxaa si weyn loogu isticmaalaa qaab-dhismeedka agabka cusub ee gaadiidka, ilaalinta biyaha, maamulka degmada, beer-beeratada, ilaalinta biyaha iyo ciidda iyo mashaariicda kale ee injineernimada. Kahortagga daxalka, xirashada adkaysi u leh iyo xoogga sare ee kaarboon-hooseeya siligga birta galvanized ama 5% -10% aluminium
Codsiga FRP ee mashruuca daaweynta bulaacada
Iyada oo horumarka degdega ah ee warshadaha, arrimaha ilaalinta deegaanka ayaa si tartiib tartiib ah loo bixiyay fiiro gaar ah, daaweynta bullaacadaha waa mid ka mid ah siyaabaha muhiimka ah ee ilaalinta deegaanka. Sida nooc cusub oo khafiif ah,-xoog sare, iyo walxaha u adkaysta, FRP pultruded profile waa. fikrad...
Codsiga Daboolka Dheecaannada ee Jidka Dhulka Hoostiisa ee Miinada Dhuxusha
Habka wax-soo-saarka dhuxusha, xaddi badan oo biyaha dhulka hoostiisa ah ayaa la soo saari doonaa. Biyaha hoose waxay ku qulqulaan qashinka iyagoo sii maraya god ku yaal hal dhinac oo waddada ah, ka dibna waxaa lagu sii daayaa dhulka iyadoo la raacayo bamka heerarka badan. Sababta oo ah bannaanka bannaan ee jidka dhulka hoostiisa mara awgeed, saxan dabool ah ayaa i...
Haddi aad tahay bilow u baahan warshad cusub oo farsamaysan oo dhamaystiran ama qalab gaar ah oo qura... ABE
Faa'iidooyinka ay leedahay FRP grating ee ...
Ma soo bandhigi kartaa shabageynta birta galvanized t...
Astaamaha iyo adeegsiga s...
Cinwaanka: 50 mitir koonfur ee isgoyska Weier Road iyo Jingliu Road, Degmada Anping, Magaalada Hengshui, Gobolka Hebei
Carrabka buuqa, Ku xidh Shabageynta Birta, Shabageynta Bar siman, Ka-hortagga Skid Grating, Ka-hortagga simbiriirixidda, Shabagyada aluminium ee Seerrated,